Ọrụ: Oge eruola ịhazi ọrụ ịre ahịa gị | Martech Zone
Sunday, Eprel 16, 2017 Monday, April 17, 2017 Douglas Karr
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị achọpụtala na atụmanya na-abawanye na ndị ahịa anyị ebe ọnụ ahịa njikọ ahụ emebeghị. N'ezie, n'afọ gara aga, anyị nọrọ ihe dị ka 15% afọ karịa afọ na ọrụ ọzọ maka ndị ahịa anyị. Nke ahụ gaara adị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere akụrụngwa, mana anyị enweghị. Anyị kwesịrị ime mgbanwe ụfọdụ siri ike ma ọ bụrụ na anyị nwere olileanya na-echekwa ndị ọrụ anyị.
Otu ọrụ bịakwutere anyị bụ Ọrụ. Tasko wuru usoro nhazi oru oma, nye ya talent, ma tinye usoro nyocha siri ike nke otutu. Ihe si na ya pụta bụ ọrụ njikwa ọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke ziri ezi nke na-eweta afọ ojuju ndị ahịa 99%
Anyị kpebiri itinye usoro ahụ n'ule maka otu ndị ahịa anyị, Indianapolis pesti akara ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na anyị lekwasịrị anya na isiokwu miri emi na eserese na ụdị ụdị ahụhụ ha na-arụ ọrụ na ya, anyị chere na ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na anyị nwere ike biputere ụbọchị ọ bụla na ntanetị mgbasa ozi ha. Na Tasko, anyị nyere iwu ka oge awa 30 nyochaa ma chọta ọnụọgụ metụtara pesti maka pests akọwapụtara nke ọma na anyị kwuru na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ ga-abụrịrị na afọ gara aga.
Ọbụghị naanị na anyị rịọrọ maka data ahụ, anyị rịọkwara ka ewezie faịlụ weghachite maka mbubataHootsuite 's nnukwu nhazi. Otu izu ka e mesịrị, anyị natara faịlụ anyị ma zuo oke! N'ime, anyị mere obere mgbanwe iji oge ahụ pests na oge iji bulie njikọ aka na foto akọwapụtara maka mmelite ọ bụla. Ihe si na ya pụta bụ na anyị nwere otu eziokwu na-egbu egbu kwa ụbọchị emebere maka afọ ndị ọzọ n'ofe Twitter, Facebook, na Google!
Nke ahụ bụ naanị otu ihe atụ nke otu esi arụ ọrụ Tasko, mana anyị kwenyere na ọ bụ ezigbo mma! Ọrụ nkwado azụmaahịa a na-arịọkarị na-achọpụta ndị na-eduga, na-eme ka ndepụta ịkpọtụrụ baa ọgaranya, na-ekepụta ọdịnaya maka mgbasa ozi mmekọrịta, na-achọpụta ndị na-eme mkpebi, ma ọ bụ na-agbasa ọdịnaya na ntanetị.
Ndị a bụ ụfọdụ Ọrụ Task Task emegoro:
Chọta kọntaktị kwesịrị ekwesị na LinkedIn, nyocha ozi kọntaktị ma tinye kọntaktị ọhụrụ n'ime CRM.
Dekọọ 600 na-eduga na mpempe akwụkwọ maka ire ere ahịa dabere na mpaghara ebe na aha ọrụ.
Tinye ngwaahịa, gụnyere nkọwa, nkọwa, eserese wdg na akaụntụ Shopify m.
Họrọ foto kachasị elu 10 kesara na Instagram n'ime awa 24 gara aga nke ejiri akara ngosi.
Mepụta ndepụta nke mmalite ndị German ndị natara usoro Series ma ọ bụ Usoro A na ọnwa 12 gara aga na-enweghị ngwa mkpanaka.
Nye a ndepụta Sweden weebụsaịtị na Alexa ogo n'okpuru 20k, na-akwado English, ma na-akwado ad pụrụ isi chọta.
Dee ajụjụ ọnụ (oge nke 2: 28: 00)
Mepụta mkparịta ụka maka Facebook Messenger bot.
Digita ọtụtụ peeji nke ederede ederede maka ọmụmụ ihe na Akwụkwọ Okwu. Pụta ihe ọ bụla na-aghọtaghị na mado na eserese.
Nye ọnụahịa dị mfe - $ 5 US kwa awa maka nnyefe ọkọlọtọ na $ 10 US kwa awa maka nnyefe awara awara.
Tọọ Task na Tasko
Tags: nyocha ahịaoru ire ahiaọrụ ahiatasko